Sheekh Aadan Madoobe oo loo doortay guddoomiyaha golaha shacabka – Radio Muqdisho
Sheekh Aadan Madoobe oo loo doortay guddoomiyaha golaha shacabka
Xildhibaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Sheekh Aadan Madoobe) ayaa caawa loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha cusub ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, kadib doorasho saacado badan qaadatay oo wareegga labaad la isla aaday.
Xildhibaan Sheekh Aadan Madoobe ayaa wareeggii ugu dambeeyey ee doorashada kaga adkaaday xildhibaan Xasan Cabdinuur. Sheekh Aadan Madoobe ayaa helay 163 cod, halka Xasan Cabdinuur uu helay 89 cod.
Doorashada Sheekh Aadan Madoobe ayaa caawa soo afjareysa xaalad hubanti la’aan ah oo dalka uu ku jiray in ka badan sanad, waxaana hadda dhisan labadii hay’adood ee sharci-dejinta oo guddoon rasmi ah leh.
Waa markii labaad ee Aadan Madoobe uu hoggaamiyo golaha shacabka, wuxuuna horay u soo noqday guddoomiyaha baarlamanka mudadii u dhaxeysay 31-ka Janaayo 2007-dii ilaa 25-ka May ee sanadkii 2010-kii.
Toos: Wareegga 2-aad ee doorashada iyo laba Musharax oo isku soo haray
Doorashada guddoomiye ku xigeennada golaha shacabka oo haatan socota